तपाईसंग भारु ५०० र १००० का नोट छन? हेर्नुहोस १० दिन भित्र नसाटे कागजको खोस्टा सरह हुनेछ ति भारु नोटहरु – ZoomNP
तपाईसंग भारु ५०० र १००० का नोट छन? हेर्नुहोस १० दिन भित्र नसाटे कागजको खोस्टा सरह हुनेछ ति भारु नोटहरु प्रकाशित मिति: बुधवार, कार्तिक २४, २०७३ समय - ०:५७:३६ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालोधन र नक्कली नोट नियन्त्रणका लागि ५०० र एक हजारको नोटको कारोबार बन्द गरेको घोषणा गरेका छन् । यो सँगै मंगलबार राती १२ बजेदेखि भारतमा यी नोट चल्ने छैनन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार राती देशबासीका नाममा विशेष संबोधन गर्दै नोट नचल्ने घोषणा गरेका हुन्। मोदी सरकारको यो महत्वाकांंक्षी र ऐतिहाँसिक ऐतिहासिक निर्णय हो। मोदीले कालोधन, नक्कली नोटका विरुद्ध यो निर्णय लिएको बताउँदै यसबाट हुने केही कठिनाईलाई झेल्न सबै भारतीय तयार रहेको बताए।
पूराना नोटलाई पचास दिनभित्र बैंकमा जम्मा समय समेत मोदीले तोकेका छन्। यी नोट हुने भारतीयले १० नोभेम्बरदेखि ३० डिसेम्बरसम्म बैंकमा जम्मा गर्न पाउने मोदीले बताए। साथै प्रमुख हुलाक कार्यालयमा पनि यी नोट साट्ने अवसर हुनेछ। पूरानो नोट अस्पताल र पेट्रोल पम्पमा ११ नोभेम्बरसम्म चल्नेछ।
यी नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर भारतमा सरकारले दुई हजार रुपैयाँको नयाँ नोट संचालनमा ल्याउने भएको छ। मोदीले भारतीय रिर्जभ बैंकले पाँच हजारको नोट ल्याउन प्रस्ताव गरेपनि दुई हजारको नोट ल्याउन सहमति दिएको जानकारी दिए। उनले दुई हजार सहित नयाँ डिजाईनमा ५०० को नोट समेत प्रचलनमा ल्याउने बताए। तत्कालका लागि एक हजारको नोट प्रचलनमा आउने छैन।नोभेम्बर १० तारिखदेखि २००० भारुको नोट बजारमा आउने छ । साथै अबदेखि एटिएमबाट सय रुप्रयाँका नोट निकाल्न मिल्नेछ । तयारीका लागि भारतमा २ दिन बैंक बन्दको घोषणा समेत गरिएको छ ।
नेपालमा भने यी नोट हुनेले तत्काल राष्ट्रबैंकमा साट्नुपर्ने भएको छ । नेपालमा १० दिन भित्र यी नोट नसाटे कागजको खोस्टा सरह हुने स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रबैंकले १० दिनको समय दिने तयारी गरेको बुझिएको छ । भारतमा समेत नचल्ने भएपछि राष्ट्रबैंकले छोटो समयको समय दिएर अवसर दिन लागेको हो । यदि तपाईसँग पनि ५०० र १००० भारु रकम भएमा तुरन्त सटही गर्नुहोस् । अन्यथा तपाईका यी नोट कागजको खोस्टो सरह हुनेछन् ।